Doorarka Iyo Mas’uuliyadaha Agaasimayaasha Ururada (Board of Directors) | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Wareysigeygii Jaalle Siyaad |Tukesomalism.com
Yuusuf Garaad, November 12, 2016
BBC Somali, January 16, 2020
Ilhaan Ciise Maxamed, February 4, 2020
Dhaqaalaha iyo SiyaasaddakoorsooyinkaMaamulka HogaankaXirfadaha & Teknolojiyada
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 16, 2015
Gudiyadda Maamulka Sarre Ee Ururada ganacsiga iyo kuwa dowliga ahba waxaa saaran masuuliyad qaas ah oo ku salaysan shaqadii loo doortay agaasimayaasha. Markii ay noqoto shaqo wa ay ka duwantahay xag nololleedka kalle ee aadanaha wadaago. Fahamka iyo doorka mas’uuliyadda waa inaad fahamsantahay marwalbo oo aad ka mid tahay agaasimayaasha iyo looxyadiisa ururka.
Waxaan rabaa inaan marka horre inaan soo gudbiyo micna guud ee ku saabsan cinwaanka aan kor kusoo xusay. Bal marka horre aan isku dayno inaan si fiican u qeexi karno waxa loo yaqaano Doorarka iyo Mas’uuliyadda Agaasimayaasha Ururadda.
Marka horre si aan u fahano Doorarka iyo Mas’uuliyadda Agaasimayaasha Ururadda waxaa laga maarmaan ah inaan si fudud u qeexno waxa loo yaqaano urur? Urur waxaa loo yaqaanaa koox abaabulan oo ka kooban labo qof illaa iyo wixii ka badan, sidda waaxda ganacsiga ama dawladaha. Urur waa koox dad ah kuwaas oo wadajir u shaqeeyaan qaab habaysan oo loogu talagalay ujeeddo la wadaago. Ururada waa inay leeyihiin hadaf la qeexi karo, halka ay u jeedaan sidda inay horumarin ku sameeyaan deegaanka markaas laga abaabulay ururkaas.
Ururada haddii aysan laheen hadaf cad waxaa adkaani karto inuu gaaro halkii laga rabay inuu gaaro. Ururka waa inuu leeyahay qanuun u gaar ah iyo qaabab uu ku gaari karaayo hadafkiisa (strategy formulations).
Waxaa macquul ah dad badan inay urur u fahansanyihiin oo kali midka dowladaha oo kali. Ururada noocyadooda waa ay kalla duwanyihiin waxayna u kalla baxaan urur aan faa’iido doon ahayn (non-profit organization) iyo kuwa faa’ido doonka ah (profit organization)
Urur walbo waxaa loo sameeyaa dano u gaar ah, haddii ay noqoto urur faa’ido doon ah iyo kuwa aan faa’ido doonka ahayn. Dhammaan ururada waa isku wada mid laakiin waxay ku kalla duwanyihiin shaqooyinkooda iyo danaha loo abaabulay ururadaas.
Ururadda aan faa’ido doonka ahayn waxaa ka mid ah sidda Mama casha Foundation oo hadafkiisa yahay inuu caawiyo bulshada qeybaheeda dhiban oo u baahan in gargaar la gaarsiiyo iyo haddii ay noqoto in ceel loo qodo. Ururada noocaan oo kalle ayaa ah hadafkiisa inuu caawiyo bulshada wax faa’ido kalle aan ka sugaynin inay ka helaan bulshada. Waxaa kalle oo jiro kuwa kalle oo ka shaqeeyo horumarinta bulshada sidda in simaaro la siiyo bulshada. Tusaalle ahaan haddii bulshada u baahantahay in laga wacay geliyo biyaha wasaqda ah ama xaalado kalle oo kusaabsan sidda cudurada dilaaga ah.
Ururada faa’ido doonka ah waxaa ka mid ah sidda shirkada Hormuud iyo kuwa kalle oo badan oo taqaanaan hadafkooduna yahay inay bulshada faa’ido ka helaan halka kuwa kallena uu yahay inay bulshada caawiyaan. Ururada noocaan oo kalle hadafkooda ugu weyn ayaa ah inay faa’ido helaan. Markii ay timaado nidaamka maamulidda ururka ayaa waxaa loo sameeyaa nidaam ku salaysan qaabkii ururkaas ku heli lahaa dhaqaalo fiican.
Dhammaan noocwalbo oo urur caalamka ka jiro wuxuu leeyahay dano gaar iyo hab-dhismeed u gaar ah. Ururada oo dhan waxay leeyihiin qaab maamulleed in ay u go’aamiyaan xiriirka ka dhexeeya hawlaha kalla duwan iyo xubnaha, iyo doorar kalla qoondeeysan, xilalka, iyo amarka lagu fuliyo hawlaha kalla duwan.
Doorarka iyo Mas’uuliyadda Agaasimayaasha Ururadda (Board of Directors) waa guddiga u xil saaran inay wax ka qabtaan arrimaha ururka ama shirkada. Agaasimayaasha waxaa loo magacaabay inay matalaan ururka oo idil. Markii la gaaro shir sannadeedka guud (SHSG) waxaa laga sugayaa inay kasoo warbixiyaan saamiyada shirkada iyo waxqabadka shirkada iyo xeeladaha ay adeegsani doonaan mustaqbalka soo socdo.
Waxaa muhiim ah in kulamo loo qabto gudigga si loogu wareysto halka ay wax marinayaan. Waxaana muhiimsan inay marwalbo joogto noqoto kulamada guddiga inta aan la gaarin shirka sanadlaha ah ama lixdii biloodba mar la qabto, si ay ulla socdaan layliga horyaallo.
Gudiyada noocaan oo kalle waxaa muhiimsan inay shaqada u leeyihiin aqoon duruqsan, maxaa yeelay waxaa horyallo waajibaad muhiim ah.
Waxyaabaha agaasimayaasha ururka horyaallo ayaa waxaa ka mid ah:
Inay go’aansadaan aragtida shirkada ama ururka iyo hawlgalka hadda horyaallo iyo midka mustaqbal la damacsanyahay in guullo laga gaaro.
Waa inay qiimeeyaan ururka habka ay ugu gudbi karaan hawlaha horyaallo iyo qaabka loo fulini karo.
Go’aaminta iyo dib u eegidda hadafka shirkada horyaallo.
Go’aaminta siyaasada ururka ama shirkada iyo horumarinta hadafyada cusub
Sidaas darted, gudigga agaasimayaasha waxay leeyihiin qanuun iyo nimaad iyaga ay degsadaan oo ay ugu talla galeen inay wax ku socodsiiyaan. Gudigga waxaa horyaallo shaqooyin badan oo loo baahanyahay inay aad ugu feeg jignadaan marka ay qabanayaan iyo halka ay ku qabanayaan.
Next post Dhaqaalaha Japan oo mar kale hoos u dhacay
Previous post Maxaad Ka Fahantay Shirkada Facebooga Sidda ay Ulla Shaqeynayso Dalalka Reer Galbeedka?